Ciidanka Xoogga Dalka oo argagixisada kala wareegay Deegaanno hoosyimaada Degmada Jamaame – Radio Muqdisho
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa howlgallo ay kasameeyeen Deegaanno hoosyimaada Degmada Jamaame ee Gobolka Jubadda hoose waxay kula wareegeen Degaannada Kaban, Bangeeni, Maano Muufo, oo 3KM ujirta Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose.
Howlgalka inta uu socday ayaa ciidanka waxay ku dileen Horjoogihii watay maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab iyo lix kale, iyadoo ciidanka ay ku qabsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Howlgalka inta uu socday ayaa waxaa lagu guuleeystay in lagu soo saaro miinooyin ay Argagixisada Al-Shabaab wadooyinka ku aaseen sida uu kusoo waramayo Wariyaha Warbaahinta Ciidamada Qalabka Sida ee Qeeybta 43aad Shirwac Cumar Baaruush.
Ciidamada ayaa deegaannada ay Argagixisada ka saareen dad shacabka ee jooga halkaasi guddoonsiiyay cuno iyo biyo maadaamaa ay Argagixisada wabiga ku soo fureen.
Howlgalka ayaa ahaa mid qorsheeysan oo lagu bartilmaameedsanayay deegaannada farakutiriska ah ee ay Al-Shabaab ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed.
Dhallinyarada Gaalkacyo oo bilaabay Qorshe Gargaar loogu arruurinayo fatahaadda Baladweyne